यस्तो छ तपाईको चैत ७ गते शनिवारको भाग्य, पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै राशीफल हेर्नुहोस् । - Nepal Times Online
यस्तो छ तपाईको चैत ७ गते शनिवारको भाग्य, पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै राशीफल हेर्नुहोस् ।
Posted on January 28, 2021 January 28, 2021 Author USER-1
काठमाण्डौ, माघ १५ गते । दुवै प्रहरीले रासन भत्ता ५० प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेका छन् । तर, सिफारिस भन्दा केही कम बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार देखिएको छ । रासनभत्ता समायानुकुल बनाउन गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको अध्ययक्षतामा एक समिति गठन गरी सुरक्षा निकायमा रासनभत्ता बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यही माघदेखि नै लागू हुने गरी […]
विर्तामोडमा महिलाको भेेटियो शव बलत्कार पछि हत्ता भएको आशका
Posted on December 22, 2020 December 22, 2020 Author USER-1
बिर्तामोड ।झापाको बिर्तामोड –२ स्थित चैतुबारीमा एक महिलाको शव फेला परेको छ । स्थानीय दुर्वल राजवंशीकी श्रीमती अन्दाजी ४२ बर्षीया विनोसरी राजवंशीको शव आज विहान खेतमा फेला परेको बिर्तामोड प्रहरीले जनाएको छ । अनुहारमा चोट पटक लागेको र कपडाहरु च्यातिएको अवस्थामा शव भेटिएको प्रहरीको भनाई छ । राती श्रीमानलाई खाना पुर्याउन हिडेकी राजवंशी नपुगेपछि रातभर […]
चिठ्ठा परेको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने झापाबाट पक्राउ ।
काठमाण्डौ माघ २६ चिठ्ठा परेको भनी प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने १ जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पक्राउ गरेको छ । अनलाईनबाट चिठ्ठा परेको सामग्री भन्सारबाट छुटाउन राजश्व लाग्ने भन्दै बिभिन्न बैकहरुको खाता नम्बर दिएर बिभिन्न ब्यक्तिहरुबाट रकम ठगी गर्ने झापा अर्जुनधारा-९ का २९ बर्षीय पंकज पौडेली बि.क. पक्राउ परेका हुन् । पौडेलीले अनलाईनको माध्यमबाट ठगी […]
माधव नेपाल झलनाथ खनालहरु एकताको पक्षमा केपी कमरेड अव बाटो खोल्नुस ।
ड्युटीमै आफ्नो बच्चालाई दूध खुवाएको कारण महिला प्रहरीलाई सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न बाध्य पारियो ! सहि या गलत ? आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला ।
इन्द्रेणीमा पुगेकी भाइरल आमा छोरी राजु परियारसंग गित गाउदै गर्दा श्रीमानलाई सम्झेर भाबुक (हेर्नुस् भिडियो)
गृहमन्त्रीलाई गृहजिल्लामा कालोझण्डाले स्वागत !
किन यस्ता समचार लेख्न सुन्नु पर्छ ! नसालु पदार्थ खुवाएर युवतीलाइ रातभर ब, लात्कार, युवती रु, दै मिडियामा, बेहोस यसरी बनाएको रहेछ (भिडियो)
Posted on February 10, 2021 February 10, 2021 Author USER-1
३०० थान लागू औषध सहित मानिस पक्राउ